» यी हुन् कमेडी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु
यी हुन् कमेडी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु
२८ पुष २०७६, सोमबार १७:१२
मकवानपुर, २८ पुस । नेपालमा सुरु भएको स्ट्याण्ड अप कमेडी प्रतियोगिता ‘कमेडी च्याम्पियन’ को लोकप्रियता चुलिएको छ । प्रतियोगितामा अग्रज कलाकार सन्तोष पन्त, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, निर्देशक प्रदिप भट्टराई र चर्चित नायिका ऋचा शर्माले निर्णायकको भूमिका निभाईरहेका छन् । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा उत्कृष्ट ७ जना छनौट भईसकेका छन् । उनीहरुलाई ई–सेवा र कमेडी च्याम्पियनको एप मार्फत प्राप्त हुने पब्लिक भोटका आधारमा अघिल्लो चरणका लागि छनौट गरिँदै आएको छ । उत्कृष्ट ७ मा परेका हाँस्य प्रतियोगीहरु हुन् आदर्शकुमार मिश्रा, अमोग अर्याल, हिमेश पन्त, प्रणेश गौतम, साजन श्रेष्ठ,सुमन कार्की र विष्णुप्रसाद गौदेल । यस भिडियो सामग्रीमा यी नै उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
२) अमोग अर्याल– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल दोस्रो प्रतियोगी हुन् अमोग अर्याल । अमोग सुन्दरीजल काठमाडौँ निवासी हुन् । यूनिक कमेडी गर्दै आएका अमोग कमेडी च्याम्पियनका सबैभन्दा कम उमेरका प्रतियोगी हुन् ।
३) विष्णु गौदेल, मेक्सम– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल तेस्रो प्रतियोगी हुन् विष्णु गौदेल । मेक्सम गौदेलका नामले समेत चिनिने विष्णु स्याङ्जा निवासी हुन् । उनको डायलग डेलिभरी र प्रस्तुत गर्ने शैलीलाई राम्रो मानिएको छ ।
४) हिमेश पन्त– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल चौथो प्रतियोगी हुन् हिमेश पन्त । धादिङ निवासी हिमेशले कमेडी च्याम्पियनको सेटमा फरक–फरक कमेडी प्रस्तुत गर्दै हँसाउँदै आएका छन् । उनी राजनीतिका विषयमा कमेडी गर्न निकै सक्षम देखिन्छन् ।
५) प्रणेश गौतम– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल पाँचौँ प्रतियोगी हुन् प्रणेश गौतम । युट्युबरका रुपमा समेत चर्चित प्रणेश धरान निवासी हुन् । उनलाई क्रियटिभ कमेडी गर्ने मध्ये एक दाबेदार कमेडियनका रुपमा लिइएको छ ।
६) साजन श्रेष्ठ– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल छैटौँ प्रतियोगी हुन् साजन श्रेष्ठ । काठमाडौँ निवासी साजनलाई मासलाई हँसाउन खप्पिस कमेडियनका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
७) सुमन कार्की– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल सातौँ प्रतियोगी हुन् सुमन कार्की । मोरङ निवासी सुमन कार्की सबैलाई हँसाउन सफल छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । भिडियो राम्रो लागेमा शेयर र लाईक पनि गर्नसक्नुहुनेछ । यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।